Manhattan, KS • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Fandriho ny vatanao sy ny fanotra nuru ao Manhattan, KS.
Manhattan dia tanàna any avaratratsinanan'i Etazonia any Etazonia amin'ny fihaonan'ny reniranon'i Kansas sy ny reniranon'i Big Blue. Io no sezan'ny distrikan'i Riley County, na dia mipaka amin'ny Faritany Pottawatomie aza izany. Tamin'ny fanisana tamin'ny 2010 dia 52,281 XNUMX ny isan'ny tanàna. Mamandrika ny fikosohan-tarehy sy fanorana nuru ao Manhattan, KS.